Sidee loo baadigoobaa oo si sax ah u isticmaalaa keywords keywords Amazon?
Waxaan jeclahay inaan bilawdo maqaaladayda iyo tabobaradayda ujeedooyinka Amazon iyo suuqgeynta macluumaadka tirakoobka sida aan u malaynayo in tiradu ay soo saari doonto dhammaan shakiacyada kuwa weli ka walaacsan haddii ay ku habboon tahay in ay ganacsigooda ka dhisto goobtan ganacsiga ama maahan.
Sida laga soo xigtay tirakoobyada warshadaha dhowaan, Amazon waa shirkad hor leh oo e-tafaariiq ah oo ku taala Maraykanka iyadoo ku dhawaad ​​136 bilyan oo doolar oo lagu iibiyo sanadka 2016. Laga soo bilaabo rubacii rubuc ee sannadka 2016, ganacsatada online-ka ah ayaa ku soo warramey in ka badan 310 milyan oo xisaabaad macaamiisha firfircoon oo caalami ah Amazon waxaa loo tixgeliyaa sida ugu qiimaha badan adduunka iyo aasaasaheeda Jeff Bezos waa ninka ugu qanisan adduunka oo dhan dakhliga guud ee $ 91bn.
Ma ogtahay waxa macnaheedu yahay? Waxay micnaheedu tahay in gabi ahaanba ganacsatada dukaankooda tafaariiqda ay ku iibsadaan Amazon waxay haystaan ​​fursad ay ku barwaaqoobaan. Xajmigaaga kuxiran waxay kuxirantahay helitaanka iyo bedelidda raadiyeyaasha kugula helaya iibsadahaaga. Hagaajinta habboon ee Amazon iyo keywords cilmi-baarista ayaa xalin kara labadan dhibaatooyinkan. Haddii liiskaaga Amazon uu leeyahay dhammaan shuruudaha loo baahan yahay iyo shuruudaha raadinta sare, waxaad helaysaa tirada ugu badan ee isticmaala si aad u ogaato oo u iibsato. Haddii liiskanagu yahay mid aan ku habboonayn ereyada muhiimka ah ama loola jeedo ama loo istcimaalo istaraatiijiyad ahaan, waxaad si fudud u luminaysaa lacagtaada iyo macaamiishaada mustaqbalka.
Taasi waa sababta qodobkan aan ka wada hadli doonno sida loo sameeyo falanqeeye xirfadeed oo loo yaqaan 'Amazon bots', isla mar ahaantaana waxay la wadaagtaa nuqulka iibinta si loo akhriyo oo loo caddeeyo dadka isticmaala celceliska.
Sidee xariif ah u isticmaali kartaa keywords keywords Amazon?
Haddii alaabtaadu ay si caadi ah uga fiican tahay Amazon, waxaad u badan tahay inaad lumiso lacag aad u badan. Haddii aad iibiso waa mid tayo sare leh, waxaad u baahan tahay inaad ku qummanaato Amazon. Si kastaba ha ahaatee, kuma filna inaad sawirradaada ka sameyso oo aad qorato liis. Waxaad u baahan tahay inaad si xoog leh uga shaqeysiiso hoos u dhigistaada si aad u sameyso qaab beddelid iyo iibin. Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso tayada adeegga macaamiisha iyo bixinta. Sida dhaqanka ayaa muujinaya, iibiyeyaasha sameeya wax kasta oo ka baxa macaamiishooda, ku guuleystaan ​​dakhliga ugu badan ee Amazon.
Sidaa daraadeed, aan si kooban ugala hadlo Amazon liiska anatomy iyo siyaabaha loo sameeyo labada roboon iyo isticmaalayaasha labadaba.
Calaamadaha Amazon waxay ka kooban yihiin qaybaha soo socda - cinwaanka, qiimaha, dhibcaha qoraalka, sharaxaadda, sawirada, iyo tixraacyada. Dhammaan qeybahaas waxay ku qiyaasaan dareenkaada gaarka ah ee ku saabsan hufnaanta search engine.
Magacu waa waxa ugu horreeya ee soo jiidanaya ama diidi kara raadiyaha Amazon. Si kastaba ha ahaatee, abuurista magacaaga, waa inaad maskaxda ku haysaa oo keliya mashiinka Amazon kaliya laakiin sidoo kale Amazon bots kuwaas oo baaraya koobabka alaabta si ay u muujiyaan natiijooyinka ugu muhiimsan ee su'aalaha user.
Si aad u qanciso baahida labada qof ee isticmaala iyo qatarta, waxaad u baahan tahay inaad abuurto koobab munaasib ah, sharraxaad ah oo la aqrisan karo oo ay ka mid yihiin iyaga oo ku jira ereygaaga raadinta ee la doonayo, nooca badeecadda, cabbirka, midabka, iyo sifooyinka kale ee muhiimka ah.
Amazon waxay bixisaa baayacmushtarro online ah oo leh tababar ku saabsan sida loo hagaajin karo cinwaanka..Tabobarkan waxaa loogu yeeraa "Hagaajinta liistada raadinta iyo Eeg," waxaadna ka heli kartaa halkan .
Arin kale oo muhiim ah oo ka mid ah joogitaankaaga xoogga ah ee Amazon waa siyaasad tartan tartan ah. Qiimuhu wuxuu u adeegaa sida saamiga Amazon iyo wuxuu ku siinayaa fursad aad ku guuleysato Box Buy. Waxaad ka heli kartaa "qiimaha iibka" iyo "qiimaha" n Sii Central, taas oo ah fursad aad ku abuuri karto dareen "heshiis". Si kastaba ha noqotee, haddii sheygaagu uu yahay mid sahlan, qiimaha sicirku wuxuu noqon karaa mid aan la sii wadin. Wax kasta oo aad leexiso, hubso inay u muuqato mid la aamini karo. Tusaale ahaan, qiimaha hoos udhaca $ 200 illaa $ 170 ayaa u muuqda mid dabiici ah, halka qiimaha hoos udhaca $ 200 illaa $ 55 codadka aan la rumaysan karin. Heshiiskaaga qiimaha waa inaanad u soo wacin qiimaha su'aasha ah ama jooji astaantaada.
Si aad u kordhisid alaabtaada oo aad u hesho dib-u-eegid wanaagsan, waxaad qiimaha ka dhigeysaa mid ka hooseeya celceliska. Adigoo iibsanaya iibka qiimaha hoose, waxaad kordhineysaa fursadahaaga inaad ku guuleysatid Amazon Buy Box iyo noqoto iibiyaha TOP ee nuucaaga.
Waxaa intaa dheer, waxaa macquul ah in la tixgeliyo abuurista qawaaniinta ku qoran liiska ku qoran si ay u siiyaan macaamiishaada caadiga ah leh qiimo jaban (F.e. 5% ilaa 20% dhimis). Waxaad ku abaal marin kartaa macaamiishaada inay iibsadaan walxo badan, iyagoo bixinaya qiimo dhimis ah iibka labaad.
Tayada sawiradaada wax soo saarka ayaa kaalin muhiim ah ka qaadata macaamiisha iibsiga go'aanka. Waxay ka dhigaan inay gujiyaan liiskaaga halkii kuwa kale. Amazon waxay leedahay shuruudaha tayada iyo qiyaasta sawirada. Waxaad ka heli kartaa bogga caawinta ee Amazon by this link .
Iyada oo aan ka tirsanahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro in dukaamada Amazon aysan iibsanin alaabtaada, waxay iibsadaan waxa ay u qabato iyaga..Haddii aad leedahay hab caqli ah oo ku saabsan liiskaaga Amazon adigoo sawiro leh, waxaad muujin kartaa kiisaska isticmaalka duwan ee alaabtaada si aad u muujiso qiimaha dhabta ah. Intaa waxaa dheer, si taxadar leh u fiirso tayada iyo isku-habboonaanta. Waxaa fiican in la shaqaaleeyo sawir qaade xirfad leh si aad u hesho sawirrada alaabtaada. Haddii macaamilkaagu uu xiiseynayo waxa aad iibiso, waxa labaad ee uu doono fiirso ka dib marka uu cinwaanka yahay qodobbo qodob. Isticmaalayaasha waxay ubaahan yahiin qaar ka mid ah qancinta iyo faahfaahinta, taasina waa sababta ay u eegayaan dhibcooyinkaaga xaanshiyaha. Waxaad u baahan tahay inaad siiso dhammaan waxyaabooyinka wax soo saarka ee qaabka ugu saxsan. Waxaa intaa dheer, waa meel sax ah oo aad si xeeladaysan u isticmaali karto shuruudaha raadintaada la raadinayo. Si kastaba ha noqotee, ha xajin xayiraadahaaga erayo badan oo muhiim ah maxaa yeelay waxay u muuqan doontaa mid aan caadi aheyn oo kor u qaadi kara Amazon shaki. Samee khudbadda saddexda xabbadood ee ugu horreeya maaddaama loo tixgeliyo sida ugu akhrisan karo, gaar ahaan qalabka mobile. Ma aha oo kaliya inaad tiraahdo sifooyinka sheyga aad ka iibsaneyso, laakiin ka dhig dhumucda faa'iidooyinka aasaasiga ah.
Sidaas darteed, haddii qiimaha faa'iido ee alaabtaada aad u aragto in ka badan baadiyeyaashu waxay qiimeeyaan lacagtooda, waxay iibsadaan.
Waxaan u maleynayaa in cutubka gaarka ahi yahay in loo adeegsado ereyada cilmi baarista iyo isticmaalka. Waxaan soo jeedinayaa in aan tixgeliyo ereyada raadinta ee la raadinayey ee la isku daro sida Dahab ah. Lakabka ugu sareeya waa in lagu dhajiyaa shuruudaha raadinta sunta rasmiga ah waxayna macquul tahay in lagu daro cinwaan. Kadibna, ereyada muhiimka ah ee dhibcahaaga iyo sharaxaadda. Ereyadaas ayaa sidoo kale la heli karaa taas oo ah sababta ay tahay inay ahaadaan kuwo ku habboon oo aan aheyn tartan badan. Heerka ugu hooseeya, waxaan u eegi karnaa shuruudaha kale ee raadinta. Waa nooc kale.
Abuuritaanka cinwaankaaga, xabadaha, sharaxaadda, iyo sawiradu waxay ku xisaabtamayaan 80% natiijooyinkaaga. Taasi waa sababta shuruudaha ugu fiican ee aad raadineysid halkan. Haddii aad hayso weedho dheeraad ah oo aan wali la isticmaalin, ha qashin oo ha ku darin goobaha dhammeystiran Source .